Afrika Atsimo No Firenena Voalohany Manohana Ny Tambajotranà Vondrom-piarahamonina Ao Amin’ny Faritra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jolay 2018 6:37 GMT
Sary natolotry ny APC ary nahazoana alàlana.
Tao amin'ny APC News no namoahana ity lahatsoratra ity voalohany ary averina avoaka eto indray ao anatin'ny fiarahamiasa eo amin'ny Fikambanana ho Fampandrosoana ny Serasera sy ny Rising Voices.
Mifantoka hatrany hatrany amin'ny elanelana eo amin'ny tontolo an-drenivohitra sy ny ambanivohitra ireo governemanta any amin'ny tontolon'ny faritra atsimo, olana lehibe iray izany hiatrehana ny zavamisy hoe olona an-tapitrisa no voahilika any ivelan'ny fiarahamonin'ny fampahalalàm-baovao. Amin'ny ankapobeny dia ny mpandraharaha goavana amin'ny finday no afaka mampiditra ny serasera any amin'ny tontolo ambanivohitra , saingy matetika dia tsy takatry ny olona ambany karama ny tolotra omeny. Raha heverina ny tsy fitoviana goavana ara-teokarena misy any amin'ireo firenena aty amin'ny tontolon'ny faritra atsimo, dia tena mampivarahontsana ny haavo misy ny fanilihana ireo serasera amin'ny aterineto sy ara-kajimirindra.
Ho an'ny APC sy ireo mpikambana maro ao aminy ary ireo mpiara-miombon'antoka, ny fampiroboroboana ireo modely isankarazany amin'ireo mpandraharana goavana amin'ny fifandraisandavitra no sehatra manan-danja amin'ny asa mba hanampiana ireo vondrom-piarahamonina malemy sy kely fivelomana. Ny marimarina kokoa, dia modely izay hahafahan'ireo vondrom-piarahamonina ireo hivelatra, hiasa sy hikarakara ireo fotodrafitrasan'ny fifandaisandavitra mizaka tenan-dry zareo manokana.
Dingana lehibe hanamafisana ireo foto-drafitrasan'ny fifandraisandavitra mizaka tena sy tarihin'ny vondrom-piarahamonina.
Tamin'ny May 2018, dingana lehibe no noraisana tany Afrika Atsimo ho fanamafisana ny fampandrosoana ny foto-drafitrasan'ny fifandraisandavitra mizaka tena tarihin'ny vondrom-piarahamonina. Nandritra ny lahateny nataony tamin'ny latsabato ho an'ny tetibola 2018 tao amin'ny parlemanta tamin'ny 17 May, ny minisitra lefitry ny fifandraisandavitra sy ny paositra afrikana tatsimo, Stella Ndabeni-Abrahams, dia nanamafy ny maha-zava-dehibe ny tambajotranà vondrom-piarahamonina.
“Fametrahana ny andian-tafika faha-4-ny revolisiona indostrialy” no lohateniny, navoitran'ny lahateniny fa ny fanànan'ny vondrom-piarahamonina modely no mampandroso ireo singa mpanorina ny ICT Development Index sy ny tanjona fampandrosoana nasongadina tao amin'ny Taratasy Fotsin'ny politika nasionaly mahitsin'ny ICT. “Ankoatra izay, resahan'ilay modely ny sakana goavana momba ny fahafahan'ny rehetra miditra, izay itadiavin'ny departemantan'ny tetikasa aterineto ho an'ny rehetra vahaolana” hoy izy nanamarika.
Ninian'ilay minisitra lefitra nolazaina ny fanohanany ny Zenzeleni Networks, fikambanana mpikambana ao amin ‘ny APC izay lasa mpandray anjara fototra amin'ny tontolon'ny tambajotra iombonan'ny vondrom-piarahamonina sy ny fidirana ao an-toerana. Nambaran'i Ndabeni-Abrahams fa ny Departemantan'ny Fifandraisandavitra sy ny sampan-draharahan'ny Paositra (DTPS), miaraka amin'ireo sampan-draharaham-panjakana eo ambany fiadidiany, toy ny Broadband Infraco sy ny State Information Technology Agency (SITA), dia “hiaraka hiasa amin'ny Oniversiten'i Cape Andrefana sy ny rantsany tsy mitady tombony, ny Zenzeleni Networks Mankosi, mba hanome aterineto mety amin'ny vondrom-piarahamonina ambanivohitra any Cape Atsinanana.”
Zenzeleni, rafi-piarahamiaina ahitàna vondrom-piarahamonina manana ny fandraharahana ara- pifandraisandavitra azy manokana
Zenzeleni dia rafitra fiaraha-miaina momba ny fanavaozana ara-tsosialy izay hahafahan'ireo vondrom-piarahamonina ambanivohitra manana ny fandraharahany manokana amin'ny fifandraisan-davitra, mamela azy ireo hanandratra ny soatoavina sy ny tombontsoa. Avy tamin'ny fikarohana momba ny fianarana ambony ho doktôra tao amin'ny Oniversiten'i Cape Andrefana (UWC) no nananganana azy. Taorian'izay, dia lasa rantsan'ny UWC izy ary miara-miasa amin'ny vondrona Mankosi any amin'ny iray amin'ireo faritra sahirana indrindran'ny Cape Atsinanana. Fikambanana iray tsy mitady tombontsoa, ny tambajotra Zenzeleni NPC, izay manome antoka fa ho tanteraka izay zavatra ilain'ilay vondrom-piarahamonina no mitantana io rafitra fiaraha-miaina io. Olona 5.000 sy birao fiasàna 10 no ampifandraisin'ny sampan-draharaha voalohany mpanolotra aterineto (ISP), ny Tambajotra Zenzeleni Mankosi Co-op Ltd, amin'izao fotoana izao, mora dia mora ny tolobidy omeny, latsaka 20 heny amin'ny an'ireo mpandraharaha efa misy, miaraka amin'ny kalitao tsara kokoa.
Vokatry ny asa an-taonany maro ny fanambarana am-pahibemaso nataon'ny minisitra Afrikana Tatsimo momba ny fanohanana ity modely ity. Carlos Rey-Moreno, mpandrindra ny fahafahana miditra amin'ilay tetikasa ao an-toerana an'ny APC sady mpiara-manorina ny Zenzeleni Networks, dia entanin-kafaliana hizara ny fahitàny ny fiantraikan'io hetsika tsy mbola nisy toa azy io. ” Vaovao mahatalanjona ity ! Tsy hoe nisy fiantraikany mivantana amin'ny asan'ny Zenzeleni Networks sy ny asany miaraka amin'ny vondrom-piarahamonina any amin'ny lemaky ny reniranon'i Mathahta fotsiny izany, fa nisy fisondrotana goavana ihany koa tamin'ny modelin'ny tambajotra iombonana aty amin'ny tontolon'ny faritra atsimo sy hatrany lavitra any.”
” Ao anaty rafitra fiaraha-miaina miha-mivangongo hatrany, izay ireo orinasa vitsy manana ny tombony ara-toekarena ihany no manana ny rafitry ny tolotra famatsiana azy ireo manokana, dia matetika sarotra ny manalava ny fahazoana mampiasa modely iray izay tena miavaka toy ny tambajotra iombonana”, hoy i Rey-Moreno nanampy. Ny governemanta afrikana tatsimo no voalohany nanohana ny tambajotra iombonana ao amin'ny tanibe, ary io karazana andraikitra io no mety hanokatra ny làlana ho amin'ny fahatokiana bebe kokoa sy ny fahafantarana tsara ireo modely ireo, tsy amin'ny sehatra nasionaly ihany fa amin'ny sehatra rezionaly sy ny any an-kafà ihany koa.”
Shaun Pather, mpampianatra momba ny rafitra informatika ao amin'ny UWC, mpikambana taloha tao amin'ny Komitin'ny vovonana mandinika ny fandaminana ny politika nasionalin'ny TIC an'ny DPTS sady filoha fahiny tao amin'ny komitin'ny fampiroboroboana ny indostria, dia naneho ny fientanentanany tamin'ny nanambaràna ilay fiarahamiasa. “Io fiarahamiasa io no mampandroso ireo fotokevitra voalaza ao anatin'ny White Paper (taratasy fotsy), ary indrindra, mamaly ny filan'ny tanjona : ny fanatanterahana ny fahafahana miditra malalaka any amin'ny tontolo ambanivohitr'i Afrika Atsimo – izay tena tsy nisy niraharaha hatramin'ny androany,” hoy izy.
Ny fiarahamiasan'ny telo tonta, ny governemanta, ny akademia ary ny Zenzeleni Networks no handrosoana amin'ny tanjona ho fampivelarana ny fikarohana hanatsaràna ny ICT sy ny kolontsaina fikarohan-javatra vaovao eto amin'ny firenena, ka tsy ho fanelingelenana ho an'ny governemanta sy ny indostria ny vokatra azo ao anaty sy ho an'ny fiarahamonina. Hoy i Pather ” tsy andrin'ny oniversiten'i Cape Andrefana ny hahafahana mandray anjara amin'ny hetsika fikarohana sy ny hanova tanteraka ny fiainana any amin'ny faritra mahantra ambanivohitr'i Afrika Atsimo.”